A320 mega qoyska xirmo - qalad
Muhiim A320 mega qoyska xirmo - qalad
Bilood 11 2 todobaad ka hor #1136 by irbaz444
Ku faraxsan guys. Waxaan dhawaan soo dejiyey a320 packet family. Waxay si fiican u rakibtay, laakiin markii aan dooranayo diyaarad popup ka muuqato ayaa leh "qalad ayaa la kulmay ..................." iyo fsx shilalka sidoo kale.
Qofna ma iga caawin karaa?
Bilood 11 3 maalmood ka hor #1143 by Camwin128
FSX miyuu burburi karaa marka A320 la doorto? Ama miyuu ku dhacaa marka nooc kasta oo diyaarad ah la doorto?
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.244